Aoka aloha, aoka aloha...toa mampivadika ati-doha | Hevitra MPANOHARIANA
zah koa ry jentl indray andro niteny irery hoe tsy tokony hoe "aoka itsy" ve no tokony ho izy fa tsy aoka aloha izany ? Mbola manome fanantenana ny mpanontany manko izany hoe rahampitso na afaka herinandro mety ho "eny" fa izao aloha non. Asa anefa.
Ahoana hoy ny Jeneraly raha teo izy niady hevitra taminareo tao am-piasana ? "18 taona ny ankizy taloha dia maotina avokoa, ankehitriny iray sisa virjiny"...
Nampidirin'i ikalamako @ 21:12, 2008-09-30 [Valio]
ka tsy maintsy ho tody any ihany tsinona, sa ?
Nampidirin'i Rajiosy @ 21:17, 2008-09-30 [Valio]
ny resaka no tapahina aloha rehefa mitady aspirine e!
Nampidirin'i jentilisa @ 21:41, 2008-09-30 [Valio]
Iny nd1 no ts nampoiziko :-). Hoy ny gasy hoe : tsinjovy iany hono ny "aorian'ny" andro ho merika ;-).
Nampidirin'i Tokinao @ 21:57, 2008-09-30 [Valio]
zany hoe mety mbola misimisy ihany ny virja aoriana miditra tokatrano izany dia ilay aloha no anetanana ny maro hoe aoka aloha eee :)
mety efa kobon'ny ntaolo ngamba izany hoe any aoriana any mety ho otr'zao :-P
Nampidirin'i simp @ 22:57, 2008-09-30 [Valio]
Nampidirin'i ikalamako @ 11:05, 2008-10-01 [Valio]
Ilay “aloha” dia midika hoe mbola hisy ny aoriana ! Ary io aoriana io dia ataoko fa midika fahamalinana, hoe diniho aloha, mila fanapaha-kevitra matotra io. Ary raha manan-tsaina izy dia tonga dia fantany hoe natao ho an’ilay ho vadiny io ! Koa raha hampiasa ilay teny hoe : “aoka mihitsy” indray dia midika hoe : “hanao toy ny môpera aho” ka mety hampitohina ilay fitiavana izay tokony nitsiry … misaraka, na mifankatia tokony hifampiandry ary. Izany hoe miandry aloha ianao vao mahazo miroso amin’io. Miandry inona ? Miandry ilay fanambadiana. Satria na ny andaniny na ny ankilany dia tokony hanaja io fotoana io daholo. Ataoko fa izay no dikan’ilay karatra mena. Izay efa lasa nialoha aloha dia afaka hatrany ny hiova toetra ka tsy hanaonao foana intsony any aoriana. “Ny toetra ratsy azo ovàna fa ny tarehy ratsy tsy azo ovàna”, izany hoe ny fiovana ara-batana dia tsy mety haverina intsony , fa ny fo, saina ary fanahy kosa dia azo ovana foana. Jeu de mots koa no tena betsaka amin’ilay ANDRASO ALOHA fa efa mahafantratra tsara ny tena dikany daholo.
Nampidirin'i tsy nitonona @ 12:33, 2008-10-01 [Valio]
Nampidirin'i tsy nitonona @ 12:34, 2008-10-01 [Valio]
ka ny fahazoako ilay carte rouge io anie dia avoaka izy io raha sendra misy lehilahy mitady hi-harceler anao raha araka ity fanazavana ity http://www.lexpressmada.com/index.php?p=display&id=19502
fa tsy hoe aoka aloha any an-trokantrano ilay izy. Ka raha olona mifanena amiko eny an-dalana na ny mpiray birao amiko mitady handrabiraby ahy no hamoahako carton rouge dia manjary manome fanantenana azy aho hoe aoka aloha fa radem angamba mety homeko ihany. Izay no mampiteny ahy hoe aoka itsy = aza mikasikasika ahy an !
Nampidirin'i ikalamako @ 15:31, 2008-10-01 [Valio]
Eo indrindra isika, ny tanora mbola tsy manambady sady mety mbola tsy ampy taona aza no omena ny karatra mena hampiasainy!
Nampidirin'i jentilisa @ 16:14, 2008-10-01 [Valio]
mba tadidinareo ve ilay hira hoe "pilôvera mena" ?
Nampidirin'i Rajiosy @ 21:05, 2008-10-01 [Valio]
Toa efa henokenoko io pilovera mena io. Tahaka ny hira avy any avaratra ilay...sa ahoana? Inona no tian'ny mpamaky lazaina?
Nampidirin'i jentilisa @ 12:53, 2008-10-02 [Valio]
hiran'i Jaojoby io jentilisa a. "Nandeha zah nandeha hozy, tamin'ny place kabary, avy le vazaha...", dia tsy tadidiko fa mifangaro daholo,
sa ahoana moa rajiosy ?
Nampidirin'i ikalamako @ 13:44, 2008-10-02 [Valio]